Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL I-Milan Skriniar Ingane Yendaba Yobuntwana I-Untold Biography Amaqiniso
I-Milan Skriniar Biography yethu ikunikeza ngemininingwane yendaba yakhe yobuntwana, impilo yokuqala, abazali, impilo yomndeni, impilo yothando (Amaqiniso entombazane nentokazi), Mfowethu, Ukuphila Komuntu Nokuphila. Siphinde sikunikeze imicimbi ebalulekile kusukela lapho ayaziwa ukuthi waziwa nini.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi lesi sikhungo sibuyela emuva siyisishayamthetho esiqinile eshesha ukwenza ukubonakala. Kodwa-ke, ababaningi abafunde i-biography kaMilan Skriniar, enikeza i-akhawunti ephelele yezigameko ezimbalwa ezithandekayo ezaziwayo empilweni yakhe. Ngaphandle kokuqhubeka kwalokho, ake siqale.
Indaba Yengane YaseMilan Skriniar:
Okwakuqala i-bio, umsakazi webhola yiSlovak. Wazalwa ngosuku lwe-11 kuFebhuwari 1995 e-Žiar nad Homen, idolobha eliseSlovakia. UMilan ungomunye wabangaphansi kwezingane ezimbili azalwa ngunina omncane owaziwayo futhi kuyise ohamba ngegama Ľubomír Šisanoar.
Imvelaphi Yomndeni kaMilan Skriniar:
Isikhungo emuva siseSlovakian ngenxa yokuzalwa. Imiphumela yocwaningo ezimpandeni zomndeni wakhe ikhomba ukuthi kungenzeka ukuthi ungoweqembu lesizwe saseSlovenska. Uhlanga lubusa ingxenye enkulu yeSlovakia.
IMilan Skriniar Ekhulela Iminyaka:
Umsubathi webhola wesikhathi esizayo ukhulele endaweni yakhe yokuzalwa e-Žiar nad Hinto eceleni komfowethu osekhulile. Ukukhula edolobheni, uMilan wayenephupho elilodwa nje lobuntwana. Iphupho bekungukuthi abe ngumdlali webhola futhi adlalela amaqembu amaningi amakhulu.
Isizinda Somndeni SikaMilan Skriniar:
Iqiniso ukuthi litshelwe, amaphupho ebhola leSlovak ayephethe okuthile ngokuthi wazalelwa emkhayeni owawuthanda umdlalo. Eqinisweni, ubaba kaMilan wayengumdlali webhola lezinyawo ngenkathi umfowabo amadala enomlando odlala lo mdlalo.
I-Career Soccer Qalisa Kanjani I-Milan Skriniar:
Ngakho-ke, akumangazi ukuthi waqala ngokuziqeqesha nge-Žiar nad Hronom yasendaweni ngaphambi kokuba abe neminyaka eyi-10. Ngesikhathi uMilan eneminyaka engu-12 ubudala, wayeshiye ikilabhu lakubo ukuze aqale umsebenzi onamandla wokuzikhandla noMŠK Žilina.
KwakuseMŠK Žilina lapho i-football prodigy ichitha khona iminyaka eminingi yomsebenzi wakhe ikhulisa amakhono esethi eyayizomsondeza ephusheni lakhe lokudlalela amakilabhu amakhulu. Ekuphakameni kokusebenza kwakhe no-Žilina, uMilan wenza iqembu lakhe lokuqala iqembu elalizoqala umdlalo weSlovak Super Liga bebhekene neFC ViOn Zlaté Moravce. Ngemuva kwalokho yathunyelwa ekilabhini ngemalimboleko.
I-Milan Skriniar Biography - Indaba Yodumo:
Ubuwazi ukuthi osemncane waseSlovak waqala umsebenzi wakhe webhola lezinyawo njengomhlaseli ononya owayehlukumeza izivikelo zokuphikisa kuqala? Kodwa-ke, waba ngumdlali wasesiswini eMŠK Žilina.
Izinguquko ezilandele isikhundla sethalente lebhola lezinyawo zambona ejwayela ukudlala endaweni yesikhungo emuva e-Zlaté Moravce (2013) nase-Italy Side Sampdoria lapho ayenenhlolokhono yonyaka owodwa (2016-2017).
I-Biography yeMilan Skriniar- Rise To Fame Story:
Lapho isikhungo sibuyele emuva ekugcineni sishiya uSampdoria we-Inter Milan, ukufika kwakhe kwaba yizihloko ngoba imali yokudlulisa eyizigidi ezingama- € 20 yamenza isidlali esabiza kakhulu kunazo zonke eSlovak.
Ngaphandle kokusho okuningi, isikhungo emuva sasihlaba umxhwele ngesizini yakhe yokuqala (2017-2018) neNerazzurri futhi sabasiza ukuba bavikele indawo ku-UEFA Champions League okokuqala eminyakeni eyisithupha. Abanye njengoba bethi umlando.
Milan Skriniar Uthando Impilo- Intombi, Umfazi, Izingane?
Kunabantu abaphikisana nenhliziyo ethathwa yinhliziyo yeSlovak. Omunye wabo yintombi yakhe nomodeli, uBarbora Hroncekova. Izindwangu zothando bezilokhu zimbili selokhu uMilan wayedlalela uSampdoria.
Njengamanje ongakabi unkosikazi kaMilan, ikhasi lika-Instagram likaBarbora lifaka igama lakhe lesibongo eceleni kwakhe. Akekho kwabadayisi onamadodana noma amadodakazi ngaphandle komshado futhi kuzoba yindaba yesikhathi ngaphambi kokuba izinsimbi zomshado zikhale ngabo.
Impilo Yomndeni kaMilan Skriniar:
Ngaphambi kokuba intombi yomvikeli ingene kulesi sithombe, ubaba wayo, umama kanye namanye amalungu omndeni bangumthombo wamaphesenti ayi-100 othando nokusekelwa akutholile. Sikulethela amaqiniso ngobaba nomama kaMilan Skriniar kanye nezingane zakubo nezihlobo zakhe. Ngaphandle kokunye, kuvumela inqubekela phambili.
Mayelana nabazali bakaMilan Skriniar:
Ukuqala, u-Ľubomír Šisanoar ungubaba wesikhungo emuva. Wake waba ngumdlali webhola lezinyawo wase-amateur futhi waba nesandla ngokungenakuvinjwa ekusizeni isikhungo sibuyele ekuthuthukiseni uthando lomdlalo ongathandeki.
Ngisho nangesikhathi sokubeka i-bio kaMilan Skriniar, ubaba wakhe usalokhu ehlaziya uchwepheshe ngokusebenza kwendodana yakhe futhi akakaze ayeke ukumcindezela ukuze aphumelele. Ngakolunye uhlangothi, akaziwa kakhulu umama wesikhungo emuva. Kepha asikho isinqumo sokuthi ujoyina amanye amalungu omndeni wakhe ukuze abuke lesi sikhungo emuva sidlala bukhoma.
Mayelana nabafowabo nezihlobo zikaMilan Skriniar:
Umvikeli ophakathi akazange avele akhulele eceleni komama nobaba wakhe. Kude nabazali bakaMilan Skriniar, unomfowethu omncane owaziwayo obekade ebholeni kodwa akazange agcine ngokuba uchwepheshe.
Mayelana nokhokho nezihlobo zomndeni kaMilan Skriniar, awekho amarekhodi omkhulu wakhe ongumama noyise. Ngokufanayo akukho okuningi okwaziwayo ngobabekazi bakhe, oomalume bakhe kanye nabazala bakhe. Intuthuko iwela ibhodi ezinganeni zomshana wakhe nomshana naye.
Impilo yomuntu siqu kaMilan Skriniar:
Khuluma ngezimpawu ezichaza umuntu wakhe, ngabe uyazi ukuthi uqhutshwa uthando, ukugxila nokuthobeka? Ngaphezu kwalokho, isikhungo emuva siyizifiso futhi sisebenza kanzima njengabantu abazalwe ngaphansi kophawu lwe-zodiac lwe-Aquarius.
Lapho uMilan engaqeqeshi noma edlala ibhola angatholakala ethatha izintshisekelo nezinto zokuzilibazisa ezimbalwa. Kubandakanya ukufunda, ukudlala imidlalo yevidiyo, ukuhamba nokuchitha isikhathi esihle nomndeni wakhe nabangane.
Indlela yokuphila kaMilan Skriniar:
Umvikeli oPhakathi unenani elinganiselwa ku-4 wezigidi zamaRandi ukusuka ngo-2020. Imithombo yemali engenayo enomthelela engcebweni yomdlali imholo nemiholo ayitholayo ngokuba yisikhungo esimangalisayo emuva.
Ubuhlakani bebhola buhola futhi okuningi ngokuvumelanisa. Ngomcebo omkhulu kuza indlela yokuphila kanokusho. KuMilan, le ndlela yokuphila yokunethezeka ifaka phakathi ukuhlala ezindlini zikadoti, ukushayela izimoto ezihlukile nokusebenzisa isikhathi sekhwalithi ezindaweni zokugcina ezibizayo.
Amaqiniso kaMilan Skriniar:
Ukugoqa umlando wethu wobuntwana kanye namaqiniso e-biography, nawa amaqiniso angaziwa noma angaziwa mayelana nesikhungo emuva.
Iqiniso # 1 - Izikhundla ze-FIFA 2020:
Ubuwazi ukuthi iMilan Skriniar inezingeni elifanele le-FIFA lamaphuzu angama-86? Njengoba esesikhundleni esinjalo, umfushane ngamaphuzu ayi-5 nje ukuthi ahlukane UVirji Van Dijk kanye nephuzu elingcono kune Niklas Sule onesilinganiso samaphuzu angama-85.
Iqiniso # 2 - Inkolo kaMilan Skriniar:
Ngemuva kocwaningo oluningi, sesifinyelele esiphethweni ngalokhu. Iqiniso liwukuthi, kunzima kakhulu ukusho ngokunembile ukuthi iyiphi inkolo eyenziwa yiSkriniar ngoba engashiyanga izinkomba. Eqinisweni, umbuzo omkhulu ongaphezulu wokuthi isikhungo emuva siyikholwa noma cha.
Iqiniso # 3 - Isilwane sikaMilan Skriniar's:
njengobuhlakani bebhola obuningi, umgcini webhola njalo wamukelwa ngemfudumalo evela enjeni yakhe yezilwane ezifuywayo noma nini lapho efika ekhaya. Lesi sidalwa esincane esimhlophe besilokhu sineminyaka enguMilan futhi sihlala sivela ezithombeni ze-Instagram naye.
Igama eligcwele Milan Šisanoar
Usuku lokuzalwa Usuku lwe-11 kuFebhuwari 1995
Indawo yokuzalwa Isazi semvelo sendawo eSlovakia
Ukudlala Isikhundla Isikhungo Sasemuva
Abazali Ľubomír Šisanoar (Ubaba)
Girlfriend UBarbora Hroncekova
Iholo I-5.5 Million Euro
Worth net I-4 Million Euro
Ukuphakama 6 izinyawo 2 inches.
Iklabhu Yobuntu Nadiar nad Homen
Ukuzilibazisa Ukusakaza, ukudlala imidlalo yevidiyo, ukuhamba nokuchitha isikhathi esihle nomndeni wakhe nabangane.
isikejana inflatable Aquarius
Siyabonga ngokufunda ukubhala kwethu okubandayo ku-Biology kaMilan Skriniar. Sikholwa ukuthi manje usumazi futhi uyamazisa ukuthi ungubani nokuthi ufike kude kangakanani emhlabeni webhola. Siyethemba ukuthi ukuthole okuqukethwe esikubeke ngaye ukuthi kungakhethi futhi kunembe? uma kungenjalo, sicela udonsele ukunaka kwethu kunoma yini engabukeki kahle ngokusebenzisa ibhokisi lokuphawula.